တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ဦးနှောက်ထွက်ကုန်များ၏ တန်ဖိုး
စာမူတပုဒ် ငါးထောင်ဆိုတဲ့ နှုန်းထားကတော့ နည်းလွန်းတယ်လို့ မြင်မိတယ်။ ဒီဘက်က အင်တာနက်ဂျာနယ်တချို့တောင် ဥပမာ ခေတ်ပြိုင်ဆိုရင် ဆောင်းပါးတပုဒ် ထိုင်းဘတ်ငွေ ငါးရာ၊ ကဗျာ အတွက် သုံးရာ ပေးတာမျိုး။ တဘက်က ကြည့်ပြန်တော့လဲ မြန်မာပြည်ရဲ့ စာအုပ် ထုတ်ဝေရတဲ့ ပုံစံကိုက ဒီလိုမျိုး စာမူခတွေ နည်းစေတဲ့ အချက်လားတော့ မသိ။ စာပေ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ကျင်လည်တဲ့လူတွေက ဒီထက် ပိုသိနိုင်မယ်ထင်တယ်။ ကဗျာကို တခြားစာတွေနဲ့ တန်းတူ စာမူခ မပေးတာကို ကျနော်လဲ သဘောမကျဘူး။ ကဗျာက စကားလုံးကို ကျစ်လစ်အောင် ရေးဖွဲ့ရလို့ ပိုတောင် အားစိုက်ရလိမ့်အုံးမယ်။
I get 4000 kyats for one article.
hee . It's enough . Ma May.
7/13/2007 4:32 AM
စာမူခ တစ်ပုဒ် ၅၀၀၀၊ အပုဒ် ၂၀ ဆိုမှ တစ်သိန်း၊ မြန်မာ့ စာပေလောကမှာ လတိုင်းလတိုင်း တစ်လကို စာ အပုဒ်၂၀ ပါနေတဲ့ စာရေးဆရာ ဘယ်မှာများ ရှိလို့လဲအစ်မရယ်။ စာရေးဆရာတစ်ယောက် တစ်လကို အများဆုံး ပါနိုင်မှ မဂ္ဂဇင်း ၄ - ၅ အုပ်မှာ စာလေး ၄ - ၅ ပုဒ်ပေါ့။ ၀တ္ထုတို စာရေးဆရာ ဆိုတဲ့ အလုပ်တစ်ခုတည်းနဲ့တော့ ဖြစ်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူးလေ။
ကို စေးထူးရေ ... ခေတ်ပြိုင်တို့ ဘာတို့က သူတို့ကို ထောက်ပံ့ထားတဲ့ funds တစ်ခုခု ရှိလို့ ဒါမျိုးပေးနိုင်တယ်နဲ့တူပါရဲ့။ ပြည်တွင်းမှာ ကြော်ငြာတစ်ခုတည်း အားကိုးနေရတဲ့ မဂ္ဂဇင်းတွေကတော့ ပေးနိုင်ဖို့ လမ်းမမြင်မိပါဘူး။